Manchester United Oo Beddelka Romelu Lukaku Ka Dooneysa Juventus Iyo Inter Milan – Damqo
Manchester United Oo Beddelka Romelu Lukaku Ka Dooneysa Juventus Iyo Inter Milan
Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa wada xaajood la bilowday kooxaha Juventus iyo Inter Milan oo ay ka dooneyso beddelka weeraryahanka Romelu Lukaku.
Laacibka afka hore uga ciyaara Juventus ee Paulo Dybala ayaa oo ka baxay safka koowaad ee tababare Massimiliano Allegri, ayaa waxay fursad siinaysaa Manchester United oo ku qancin karta inay lacagta iska qaataan, halka ciyaartoygana mushahar badan iyo boos joogto ah ay kusoo jiidan karto.
Manchester United, waxa kale oo ay dooneysaa laacibka weerarka uga ciyaara Inter Milan ee Mauro Icardi oo toddobaadkii hore laga qaaday kabtanimadii, isla markaana uu khilaaf soo kala dhex galay tababare Luciano Spalletti iyo maamulka kale ee kooxda, kaas oo salka ku haya heshiiska u dhexeeya.
Manchester United waxay qorshaynaysaa in xili ciyaareedka soo aaddan ee 2019-10 uu ugu bilaabmo wejiyo cusub iyo weeraryahanno awood badan oo ka caawiya inay kusoo laabato horyaalnimada oo aanay ku guuleysanin intii uu Sir Alex Ferguson ka tegay, waxaana u calaamadsan Dybala ama Icardi oo ay ku xulatay qaabka ay u guurguuraan ee khadka dhexena usoo caawiyaan, haddana goolasha u dhaliyaan.
Manchester United waxay aaminsan tahay in labada laacib uu mid kastaa ku kici doono lacag ka badan £100 milyan, waxaanay u diyaarsanaysaa wax kasta oo ay ku heli karto, iyadoo qorshaha ay u gudbin doonto kooxahan uu ka mid noqon doono Lukaku oo dhinaca kale u wareega.
Tababare Solskjaer ayaa si buuxda uga saaray safkiisa Romelu Lukaku, waxaanu ka door biday Marcus Rashford oo ah weeraryahanka koowaad ee uu xilligan ku xisaabtamo, hase yeeshee waxa uu fursad ka heli karaa dhaawacyada soo gaadhay Jesse Lingard iyo Anthony Martial oo laba illaa saddex toddobaad garoomada ka maqnaan doona.
Previous Sawirro:-Madaxweynaha Jubbaland oo xariga ka jaray dhismayaal cusub
Next Wadooyinka qaar ee Muqdisho oo saakay xiran